दीपकको दशैं सम्झना : ५ रुपैयाँ जित्दा आफूलाई करोडपति सम्झिएको त्यो पल ‍‍…:: Naya Nepal
यसपटकको दशैं कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ ?
अलि फरक तरिकाले । पहिले जसरी होइन । मास्क लगाएर, कोरोना भगाएर, घरभित्रै बसेर, स्यानिटाइजर घसेर… ।
मिस भाको कुराचाहिँ हामीलाई माया गर्ने दर्शक र मेरो एउटै हो ‘छक्का पञ्जा’ ।
जिन्दगीमा सबैभन्दा सम्झनलायक दशैंको सम्झना ?
हरेक सम्झना अर्कोभन्दा रोचक नहोला, तर फÞरक छ । त्यसैले म कम्पेयर गर्दिनँ ।
अवीरमा लत्पतिएको आशीर्वादसहित खाममा आएको पैसो अनि लंगुरगुच्चामा जितेको ५ रूपैयाँले आफूलाई नै करोडपति सम्झिएको पल । त्यो नै महत्त्वपूर्ण थियो । अहिले त्यो कहाँ पाउनु ?
दशैंमा सपिङ गर्ने बानी कत्तिको छ ? अहिले कसरी सपिङ गर्दै हुनुहुन्छ ? के–के किन्दै हुनुहुन्छ ? को–कसका लागि किन्दै हुनुहुन्छ?
सपिङभन्दा त सपिङबाट स हटाएर पिङ नै राम्रो । सपिङ सेक्सन यसपटक मेरो मन्त्रालयमा पर्दैन ।
खल्तिमा जसको गाँठ छ, मन रमाइलो । मन रमाइलो सबै रमाइलो । पैसा नहुँदा वरपर अरूको दशैं बबाल देखेपछि त्यही दशैं नरमाइलो ।
पहिला पिङमा झुलिन्थ्यो । अहिले क्वार्टरले झुलिन्छ । क्वार्टरले पिङको जागिरै खाइसक्यो ।
दशैंका बेला खानपानमा ध्यान नदिएर धेरै मानिस बिरामी हुने गरेको थाहै छ, केही सुझाव दिनुस् न ?
मासु नखाई दशैं हुन्न भन्नेहरू नै हो समस्या । अर्को दशैं नै आउँदैन भन्ठानेर कोचेको कोच्यै गर्नुभएन नि ! रक्सी पनि खानु पर्‍यो तर घिच्नुभएन ।
सानो छँदा सपना सानो थियो । सन्तुष्टि धेरै थियो । अहिले उपलब्धि धेरै छ । सन्तुष्टि छैन । शायद, फरक त्यही हो ।
मालाश्री धुन ।
ह्याकरको निशाना स्वास्थ क्षेत्रमा, यसरी हुँदैछ संवेदनशील सूचनाको दुरूपयोग
साइबर हमला र सेक्युरिटी ब्रिचका घटना विश्वभर बढिरहेको अवस्था छ । यस किसिमका साइबर हमलाबाट कुनै क्षेत्र पनि अछुत छैनन् । तर स्वास्थ क्षेत्र एउटा अत्यन्तै संवेदशील क्षेत्र हो, जुन धेरैजसो साइबर हमलाको निशानामा पर्ने गर्छ ।किनभने स्वास्थ क्षेत्रमा त्यस्ता धेरै व्यक्ति स्वास्थका डेटा तथा तथा अनुसन्धानमूलक जानकारीहरु पाउन सकिन्छ जसको मूल्य कालोबजारमा एकदमै धेरै हुन्छ । हालै भएका केही अध्ययनहरुमा स्वास्थ क्षेत्रले एकदमै धेरै साइबर हमलाका मामिलाहरुको सामना गरेको देखियो । ह्याकरहरुले नेटवर्क तथा सिस्टममा छिरेर मेडिकल डेटा चोरी गर्ने प्रविधिहरुलाई परिमार्जन गर्दै आइरहेका छन् ।त्यस किसिमका डेटा विदेशी संस्था बेच्न र कुकर्त्यमा प्रयोग हुन सक्छन्। बिरामीको डेटा अपराधिक गिरोहहरुलाई बिक्री गर्नका साथै त्यस किसिमका डेटा प्रयोग गरी विभिन्न अवैध कारोबारसमेत हुन सक्छन् । यदि स्वास्थ क्षेत्रमा काम गरिरहेका संस्थाहरुले बिरामीहरुको डेटा तथा तथ्यांकलाई डिजिटाइज गरेका छन् भने उनीहरु एकदमै चनाखो हुनुपर्दछ । किनभने डेटा ब्रिचले ठूलो समस्या क्षति निम्त्याउन सक्छ ।उदारहणका लागि हिप्पा जर्नलको अनुसार म्यासेच्युट्स आधारित साउथ सोर हस्पिटलले ८० हजार बिरामीहरुको डेटालाई सुरक्षा प्रदान गर्न नसक्दा सात लाख ५० हजार डलरको जरिवाना तिर्नु परेको थियो । बेज्ले ब्रिज इन्साइटको प्रतिवेदन अनुसार अमेरिकामा २०१८ मा अन्य क्षेत्रको तुलनामा स्वास्थ क्षेत्र सबैभन्दा धेरै डेटा ब्रिचको घटनाबाट आक्रान्त भएको थियो ।यस्तै २०१९ मा सबैभन्दा धेरै स्वास्थ क्षेत्र ह्याकरहरुको निशानामा परेको थियो । जसमा करिब एक अर्ब डलर मूल्य बराबरको दशौं लाख बिरामीहरुको विवरण बाहिरिएको थियो । २०१९ को अन्त्यमा अष्ट्रेलियाका धेरै अस्पताल डेटा ब्रिचबाट पीडित भएका थिए । साउथ वेस्ट भर्जिनिया र गिप्सल्याण्डका धेरै स्वास्थ सेवा प्रदायकहरुले बिरामी तथा प्रशासनिक कामका विवरण गुमाउनु परेको थियो । यस्तै कोभिड १९ को समयमा त स्वास्थ क्षेत्र अट्याकरहरुको अझै ठूलो निशाना बनिरहेको छ । गत फेब्रवरीमा कोरोना भाइरसको भ्याक्सिनमाथि अनुसन्धान गरिरहेको बेलायतस्थित ह्यामरस्मिथ मेडिसिन रिसर्च एचएमआर टिमले पनि साइबर ब्रिचको सामना गरेको खबर आयो । गत मार्चमा ह्याकरहरुले विश्व स्वास्थ संगठनलाई समेत निशानामा राखेको थियो, तर उ सफल हुन सकेन । किनभने संगठनको इमेल सिस्टमलाई ह्याकरहरुले निशाना बनाइरहेको संगठनले सुरुमै डिटेक्ट गर्न सक्षम भयो ।
स्वास्थ क्षेत्रमा साइबर सुरक्षा चुनौती
भेरिजोनको २०१६ को डेटा ब्रिच अनुसन्धान प्रतिवेदनको अनुसार अधिकांश ह्याकहरु पैसाका लागि हुने गर्छन् । ह्याकरले त्यस्ता जानकारी प्राप्त गर्न सजिलो माध्यमहरुको प्रयोग गर्छन् । परिणामस्वरुप स्वास्थ क्षेत्रमा धेरै सामान्य थ्रेट पनि जोखिमपूर्ण हुन्छन् । जस्तै
माल्वेयर तथा रेन्समवेयर
यसमा स्वास्थ संगठनको डिभाइस, सर्भर तथा सम्पूर्ण नेटवर्कलाई नै बन्द गर्न साइबर अपराधिहरु माल्वेयर तथा रेन्समवेयरको प्रयोग गर्छन् । रेन्समवेयरबाट सबै डेटा इन्क्रिप्ट गरेपछि त्यस्ता इन्क्रिप्सन हटाउन फिरौती माग्ने गर्छन् ।
कमजोर एप्लिकेसन तथा स्टोरेज
केही स्वास्थ संस्थाहरुले आफ्नो मेडिकल डेटा रेकर्ड तथा स्टोर गर्न कमजोर तथा सेक्युरिटी प्याच नभएका एप्लिकेसनहरु प्रयोग गर्दछन् जसलाई सजिलै ह्याकरहरुले दुरुपयोग गर्न सक्छन् ।
क्लाउडमा विवरण तथा डेटा भण्डारण गरेर राख्ने चलन बढ्दै गइरहेको छ । तर राम्रोसँग डेटा इन्क्रिप्सन नगरी यसरी क्लाउडमा राख्दा क्लाउड पनि अट्याक स्पट बन्न सक्छ ।
साइबर अपराधीहरु सधै लोकप्रिय वेबसाइटसँग मिल्दोजुल्दो साइट बनाउँछन् । यसले गर्दा प्रयोगकर्ता भ्रममा पर्ने गर्छन् ।
संवेदनशील डेटा हत्याउन अट्याकरहरुले कुनै लोकप्रिय तथा आधिकारिक जस्ता देखिने साइटहरुबाट मेल पठाउने गर्छन् ।
इन्क्रिप्सन ब्लाइन्ड स्पट
स्वास्थ तथ्यांक सुरक्षित राख्न जब इन्क्रिप्सन महत्वपूर्ण हुन्छ, तब ह्याकरहरु ब्लाइन्ड स्पट बनाएर डिटेक्ट टुलबाट बच्न सक्छन् ।
कमजोर पासवर्ड, इन्क्रिप्ट नगरेका उपकरण तथा नियममा नबस्दा कर्मचारीले पनि स्वास्थ क्षेत्रलाई जोखिम स्थितिमा पुर्‍याउन सक्छन् । यस किसिमका साइबर जोखिमबाट बच्नका लागि स्वास्थ निकायहरुले आफ्ना कर्मचारीबीच स्वास्थ क्षेत्रमा तथ्यांकको संवेदनशीलता र साइबर सुरक्षाको चेतना विस्तार गर्नुपर्दछ ।साथै जुनसुकै स्वस्थ सेवा प्रदायक कम्पनीसँग सुरक्षा चुनौती आएको अवस्थामा कसरी समाधान गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना हुनुपर्दछ । कुनै पनि किसिमको सुरक्षा कमजोरी उत्पन्न भएको अवस्थामा त्यसलाई समाधान गरिहाल्नु पर्दछ । सिस्टमलाई हरेक क्षण सुरक्षा प्रदान गर्नका लागि सेक्युरिटी रिसर्च कम्पनीहरुसँग साझेदारी समेत गर्न सकिन्छ ।